တရုတ်နိုင်ငံမှ သွေးစွန်းသော ဖျော်ဖြေမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရုတ်နိုင်ငံမှ သွေးစွန်းသော ဖျော်ဖြေမှု
Posted by petitelapine on Jul 27, 2010 in News | 20 comments
လူလူခြင်း နှိပ်စက်တဲ့ ခေတ် ၊ လူက တိရိစ္ဆာန်ကို နှိပ်စက်တဲ့ ခေတ်ကြီး ကုန်ဆုံး သွားပြီလို့ ကြွေးကြော် နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အလွန်ကို ရွံရှာ စက်ဆုပ်ဖွယ် ကောင်းလှပါတယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ် ကျေး မှု နဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေကို မဝေဖန်လိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အာသီသ ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက် နွား တစ်ကောင်လုံးကို ၀ယ်ပြီး ကျားတွေရှေ့ကို ပို့ စားသောက်စေတဲ့ တိုးရစ်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ရွံရှာမိပါတယ် ။ ပုံတွေထဲမှာ နွားတစ်ကောင်ရဲ့ ကျဆုံးမှုကို အားရ၀မ်းသာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်နေတဲ့ တိုးရစ်တွေကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သွေးစွန်းသော ဖျော်ဖြေမှု တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကို ကမ္ဘာ့တိရိစ္ဆာန် ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ဘာကြောင့် အရေးမယူရသလဲဆိုတာကိုတော့ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကံကံ၏ အကျိုးဆိုတာကတော့ နောက်ဘ၀ အထိ မကူးပါဘူး ။ ကိုယ်ပြုခဲ့သောကံဟာ ကိုယ့်ဆီကို အမှန်ပြန်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို စတေးခံနေရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် အသုံးချခံနေရတဲ့ အသက်တွေ ကမ္ဘာကြီးအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမှာပါလိမ့် ။
ဘာများကြည့်ကောင်းလို့လဲ …… အဲဒီနွားရဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုသာပို့လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလား … ကိုယ်တိုင်ခံစားရအောင်လို့လေ ….. နွားခမျာသနားစရာ …. အသေဆိုလည်းတော်သေးတယ် … အရှင်လတ်လတ်ကြီး …
ကျားတွေဘက်က ပြန်ကြည့်ရအောင်။ သတ၀ါတွေကို အစာရေစာပေးတာ ကုသိုလ်ရတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါဆို ဒီနွားတွေကို ခင်ဗျားသတ်ပြီး ကျားတွေကို ကျွေးမှာလား။ ကျားတွေ အငတ်ထားမှာလား။ သူတို့ ဘာသာသူတို့ သဘာဝကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးစားသောက်တာဘဲ မဟုတ်လား။ မွေးမှတော့ ကျွေးရတော့မှာပေါ့။ ကဲ ခင်ဗျားရော အိမ်မှာ ရွှေငါးလေးတွေ မွေးဘူးမှာဘဲ။ အဲဒီငါးလေးတွေကို ရေတီတွေ၊ ပိုးလောက်လန်းလေးတွေ ဘာတွေလဲ ချကျွေးဘူးမှာဘဲနော်.. ။ ရေတီလေးတွေ သနားပါတယ်လို့ ပြောဘူးလား။ လောက်လန်းလေးတွေ သနားပါတယ် လို့ပြောဘူးလား။ အခုလဲ ဘာထူးလို့လဲ ပြန်စဉ်းစားနော်…
ဟယ်အားအားယားယား အကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ် ။ ဒီလောက် ကျားတွေကိုစာနာချင်ရင်လည်း mandalay thar ရေ မင်းမွေးမှပဲလွှတ်ပေးထား ။ ဒါမှလူလိုက်ကိုက်မှာ ။
Another bloody entertainment of China is the suffering of Burmese people.
ကလေးငယ်တွေဟာ အသားစားတာတွေများရင်၊ လက်မဆေးပဲ တွေ့တဲ့အစားအစာ ပါးစပ်ထဲထည့်၇င်..ဗိုက်ထဲသံကောင်ဥတွေရောက်ပြီး သံထတတ်ပါတယ်။
သံကောင်တွေဗိုက်ထဲမှာေ၇ာက်နေလို့ ဗိုက်ကလေးတွေပူနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ မြန်မာပြည်ကျေးလက်တွေမှာ တွေ့ဖုးကြမှာပေါ့..။
အဲဒီသံကောင်တွေဟာ ကလေးကို ၀မ်းကိုက်ဗိုက်နာ စတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် အဲဒီသံကောင်တွေ ဦးနှောက်ထဲေ၇ာက်ပြီး အသက်ဆုံးတာလဲရှိပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဗိုက်နာရောဂါ အပြင်းအထန် ခံစားနေရတဲ့ ကလေးလူနာကို ဆရာဝန်က ဆေးတိုက်၊ဆေးထိုးလုပ်ပြီး ကုသရာအဖြစ်အပျက်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
ကလေးဗိုက်ထဲကသံကောင်တွေသေအောင် သံချဆေးလည်းကျွေးပါတယ်။ ၀မ်းကိုက်နေရင် ပျောက်အောင် ၀မ်းကိုက်ပျောက်ဆေးလဲတိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝန်အပါအ၀င်..ကလေးမိဘတွေလည်း သံကောင်တွေ သေပါစေကြောင်း။ ၀မ်းကိုက်ပိုး သေပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း ကလေးဝမ်းသွားတဲ့အခါကို စောင့်ကြရတယ်ဆိုပါတော့..။
အင်း…၀မ်းသွားပြီး…သံကောင်အသေလေးတွေများ ထွက်လာတဲ့မစင်ထဲမြင်ရရင် စိတ်ချမ်းသာကြတာပေါ့…။
လူတွေနေ့စဉ်လိုလို ပဋိဇီဝဆေးဝါးတွေသောက်ပြီး…ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ပိုးမွှားတိရိဆန်တွေရယ်။
လူတွေစားသောက်ဖို့ လှူဖို့၊ တန်းဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး နေ့စဉ်အသတ်ခံရတဲ့ ကြက်၊၀က် စတဲ့သတ္တ၀ါတွေရယ်..။
ပိုးထိုး၊ လောက်ကိုက် မရှိ…သန်စွမ်းတဲ့ အသီးအနှံ၊ အရွက်၊အမြစ်၊ သစ်ဥ၊သစ်ဖု ဖြစ်စေဖို့ ပက်ဖြန်းရတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းသူထုတ်သူ၊ဖြန့်သူ၊ သုံးသူတွေရယ်..။
အသားငါး အသီးအရွက်ဈေးဝယ်ထွက်သူ ယောက်ျား၊ မိန်းမ လူသတ္တ၀ါတွေရယ်..။
ငါးပါးသီလထဲက ပါဏာတိပါတ-သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှာ မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ်ဓဘာသာက ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်..။
ဒါကြောင့်လဲ တရုပ်ပြည်မှာ ရေကြီး မြေပြို ကျောက်မီးသွေးမိုင်းပြို လူတွေကပ်အမျိုးမျိုး ဆိုက်နေတာပေါ့။
သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းပဲမြင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ကျားကိုကျွေးတဲ့သူကလည်း ကျွေးတဲ့သဘာဝပဲ။ဓာတ်ပုံရိုက်ကျတာကလည်း သူတို့သဘာဝပဲ။ကျားစားတာလည်း စားတဲ့သဘာဝပဲ။ငရဲကျကြမှာလည်း သဘာဝပဲ။အားလုံးကိုသဘာဝလို့လက်ခံထားလိုက်ပါ။
တွေလည်းပဲ အားလုံးတွေ့ကြုံနေရတာပဲမဟုတ်လား။ကို့သဘာဝကို ကိုယ်တိုင်ပဲအကောင်းဆုံးဖန်တီး ကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။
ရှုပ်သွားတာဘဲ ကွန်မန့်တွေ လိုက်ဖတ်လိုက်တာ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပေါ့လေ။ ကျားက နွားကိုစား.. ကျားကို လူက အရေခွံစုတ်.. လူကို လူက ပြန်သတ်။ လူကလည်း လူကို ပြန်သတ်။ အမျိုးစုံနဲ့ ချာလပတ်လည်နေတာဘဲ လူကို လူက သတ်ဆိုတာ စစ်မီးတွေ ဖြစ်ပြီး လက်နက်မျိုးစုံတွေနဲ့ တယောက်ကို တယောက် သတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို ပြောချင်တာပါ
Ko Artless says:
တကယ်တော့….ဒါက အကုသိုလ် အလုပ်ပါဘဲ….. ကြက်ဒိုင် ၀က်ဒိုင် ငါးဒိုင် နွားဒိုင် က လူတွေလိုဘဲပေါ့……..
တိုးရစ် ဆိုတဲ့ သူက လည်း အကုသိုလ်ကို ၀ယ်ယူကျတယ်….. အကုသိုလ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် လုပ်ပြီး အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုဘဲ ပြန်ရောင်းချ…..
လောကကြီးမှာ နောက်ဆုံးတော့လဲ သတ်တဲ့လူတွေ ရှိနေမှာပဲ .. အသတ်ခံရတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေမှာပဲ .. လူဖြစ်ဖြစ် သတ်တ၀ါ ဖြစ်ဖြစ် .. သံသရာထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသမျှတော့ .. ဒီ အနိဋ္ဌာရုံတွေ မြင်နေရမှာပဲ (ပတ်ဆင့်တွေ မရိုက်တတ်လို့ အသံထွက်အတိုင်း ရိုက်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ) .. ဒီတော့ သံဝေဂနဲ့ ကြည့်မှာလား .. တဏှာနဲ့ ကြည့်မှာလား .. အမှတ်တမဲ့ ကြည့်မှာလား .. ကိုယ်တိုင်ရော ပါမှာလား ဆိုတာ တစ်ဦးစီမှာ မူတည်တယ်လို့ မှတ်ချက် ပြုပါရစေ ..
ခင်ဗျားတို မေ.နေလား သူတို ဘုရားသခင်က အဲဒီအပြစ်ကို ကိုစား ခံပေးတယ်ဆိုလားပဲ
ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာ ကို တိုးရစ် သနားမှ နွားချမ်းသာလို့ ပြောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။ အင်မတန် မိုက်မဲတဲ့ တိုးရစ်ပဲ။ ချမ်းသာမှုကို အကြောင်းပြုပြီး အကုသိုလ်ကို ငွေပေးဝယ်တယ်ဆိုတော့။
အင်းးး အားကြီးတဲ့သူတွေသာ အသက်ရှင်xxxxx အားနဲတဲ့သူမရှင်နိုင်ဘူး..။
can’t see anything ………….
လူတွေများ အကုန်လုပ်တယ် (လူ့အလုပ်တင်မကဘူး)
ကျားကတော့ အစာအတွက် သတ်စားရတာ သဘာဝပဲ
တောထဲမှာပဲ သူ့ဘာသာနေ၊ သူ့ဘာသာရှာစားပစေပေ့ါ
ဒီအရာတွေ ဘယ်အချိန်ကြမှ အဆုံးသတ်နိုင်မလဲ? ? ?